ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းက New York
လေယာဉ်ငှားရမ်း၏စျေးနှုန်းနှစ်ကောင်အတွက်ပျံ၏အသီးအသီးနာရီသည်. လေယာဉ်ကိုအမျိုးမျိုးအကြားစျေးနှုန်းကွာခြားချက်များ, မအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်. While others aren't that luxurious some plane are luxurious. သေးငယ်တဲ့မျှသာလေး-ခရီးသည်ထိုင်ခုံအချို့လေယာဉ်ကြီးမြတ်ထက်တဒါဇင်ဧည့်သည်များအတွက်အခန်းရှိသူတွေကို-ရှိနေစဉ်.
တယ် https://www.wysluxury.com/private-jet-charter-new-york/ သငျသညျအနီးပိုပြီးတည်နေရာအတွက်
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်, တက္ကဆက်ပြည်နယ်, နီဗားဒါး, အီလီနွိုက်, ဂျော်ဂျီယာ